2013-02-17 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
IN Cleaner - ON Friday, February 22, 2013 No comments
2013 ရဲ့ အသစ်ထွက် System Cleaner Software လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်..ကွန်ပျူတာအတွင်း မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်များကို အကောင်းဆုံးရှင်းလင်းပေးနိုင်ပြီး..အခြား Cleaner များထက် အာသာချက်များ ပိုမိုပါဝင်လာပါ တယ်..
ကွန်ပျူတာ System အတွင်းသို့ မလိုအပ်ဘဲဝင်ရောက်လာသော Virus, Malware အဖျက်အမှောင့် Program များကို တားဆီးကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး Windows ရဲ့ Security ကိုလဲ အကောင်းဆုံး ထိန်းညှိပေးမယ့်
Software ကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်..Windows ရဲ့ အားနည်းချက်များကို ရှာဖွေပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပြီး.
Hacker များရဲ့ ထိန်းချုပ်ဝင်ရောက်မှုမှလည်း တားဆီးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်..Network အတွင်း အသုံးပြု ရန်အတွက်လည်း အထူးသင့်တော်တဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်..စက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးမြှင့်တင် ပေးနိုင်ပြီး ကွန်ပျူတာ System လုံခြုံရေးကို စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အကောင်းဆုံး Software ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်..Download ရယူနိုင်ပါပြီ။
ကနေဒေါင်းလိုက်ပါ လွယ်ကူပါတယ်.. ကလစ်လိုက်ပါ ကျလာတဲံစာမျက်နှာရဲ့
ညာအပေါ်ထောင့်က skip ကိုဆက်ကလစ်လိုက်ပါ..အဲမှာ အစိမ်းရောင်နဲ့ Download(4.4m) ဆိုတာကို ကလစ်တာနဲ့ ဒေါင်းနေပါပြီ... ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်...
တစ်ကယ်ပဲ သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ .. ကျွန်တော် စမ်းသုံးကြည့်လိုက်တော့ ဒီဆော့ဝဲလေးတစ်ခုကို Install လုပ်ထားရုံနဲ့ တခြားသော ဆော့ဝဲတော်တော်များများကို သုံးစရာမလိုလောက်အောင် အဆင်ပြေတာ တွေ့ရပါတယ် .
ထူးထူးဆန်းဆန်း ဆော့ဝဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး .. Win ASO ပါ .. သုံးဖူးတဲ့ လူတွေကတော့ ကျွန်တော်ပြောတာ အမှန်ပဲဆိုတာကို လက်ခံမှာပါ ..
အခုကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ ဗားရှင်းမှာက အရင်ဗားရှင်းတွေမှာ မပါခဲ့တဲ့ Feature တွေ ပါလာတာကို တွေ့ရပါတယ် ..
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာတွေဟာ အသုံးပြုချိန် ကြာလာတာနဲ့ အမျှ Error တွေ ပိုပိုများလာတယ် ..
Junk ဖြစ်နေတဲ့ ဖိုင်တွေ စုပုံလာတယ် .. Temp .. Cookies .. Recent ... Thumbnail Cache စတဲ့ ၀င်းဒိုးစနစ်ကို လေးလံစေတဲ့ အမှိုက်လိုဖိုင်တွေ များသည်ထက် များလာပါတယ် ..
ဆော့ဝဲတွေကိုသုံးရင်း Registry မှာ Error တွေ တက်လာတယ် ..
ဒီလိုနဲ့ ကြာလာတော့ ၀င်းဒိုးဟာ သုံးရတာ ထိုင်းမှိုင်းလေးလံလာပြီး နောက်ဆုံးမှာ Hardware ပိုင်းတွေကိုပါ ထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ် ..
ဒီဆော့ဝဲလေးက .. အဲဒီလို ကွန်ပြူတာကို လေးလံစေမယ် အမှိုက်ဖိုင်တွေကို ရှင်းလင်းပေးတဲ့ အလုပ်တွေ
Registry ကို ပြုပြင်ပေးတဲ့ အလုပ်တွေအပြင်
Feature အသစ်တွေ အနေနဲ့
မှားဖျက်မိတဲ့ ဖိုင်တွေကို ရှာဖွေပြီး Restore လုပ်ပေးမယ် Data Recovery
အင်တာနက်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ထိန်းကျောင်းပေးမယ် IE Manager
ကွန်ပြူတာကို လိုသလို ပိတ်ပေးမယ့် Auto Shutdown
စက်ထဲမှာ မလိုတော့တဲ့ ပရိုဂရမ်တွေကို စနစ်တကျ Uninstall လုပ်ပေးမယ့် Uninstall Manager
၀င်းဒိုးအတက်မှာ နှေးကွေးစေတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေကို ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်တဲ့ Startup Manager
ကိုယ့်စက်ထဲမှာရှိတဲ့ Software တွေ အသုံးပြုထားတဲ့ Hardware တွေကို တစ်နေရာထဲမှာပဲ ကြည့်ရှုနိုင်မယ် System Information
အဲဒီလို Feature အသစ်တွေပါလာတဲ့ အတွက် ဒီဆော့ဝဲလေးတစ်ခုဟာ ဆော့ဝဲတော်တော်များများရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တစ်ပေါင်းတည်း လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးအဖြစ် နှစ်သက်စရာကောင်းပါတယ် ..
ကဲ .. လိုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ
ဒေါင်းလို့ရလာပြီဆိုရင်တော့ Install လုပ်ပြီးတဲ့ အခါ Program ကို Run လိုက်ပြီး Registration လုပ်ဖို့ Key ကို Notepad လေးနဲ့ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် .. အဲဒီကီးကို ထည့်ပေးပြီးရင်တော့ ဆော့ဝဲလေးဟာ Full Version ဖြစ်သွားပါပြီ . အသုံးပြုပုံကတော့ ခက်ခက်ခဲခဲ သိပ်မပါလို့ အသေးစိပ် မရှင်းပြတော့ပါဘူး ..
ဒီကောင်လေး ကတော့ Format Factory 2.80 Portable လေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း Portable လေးတွေ ပဲသုံးပါတယ်။ သုံးရတာလည်း အဆင်ပြေပါတယ်--- မိမိတို့ ၇ဲ့ ကွန်ပျူတာ ထဲမှာလဲ မလေးတော့ ဘူးပေါ့ဗျာ---- သုံးနေတဲ့ သူအများစု ကတော့ ဒီကောင်လေးရဲ့ Features လေးတွေ ကိုသိကြမှာပါ။ ဒီကောင်လေးဟာ Video ဖိုင်တွေ Music ဖိုင်တွေ နဲ့ Photos လေးတွေ ကိုပါ ပြောင်း လဲပေးနိုင် တဲ့ Converter လေး တစ်ခုပဲဖြစ် ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ် ကတော့ 48.3 MB ရှိပါတယ်။
လိုချင်တဲ့ သယ်ချင်းများ အောက်က download လင့်လေးကနေ ယူသွားလိုက်ပါ-----
Auslogics BoostSpeed software full version for computer
Serial key ပါတယ်နော်အဆင်ပြေတဲ့လင့် ကယူသွားလိုက်ပါ...
Tuneup Utilities 2013 Serial Number ကလေးပါ Computer အရမ်းနှေနေရင်
ကျွန်တော်တို့ Computer တွေမှာ.Copy Paste လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်...Unistall လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်....Hardisk ထဲမှာတော့အမှိုက်လေးနည်းနည်းပါးပါး ကျန်ခဲ့ပြီး..ဖိုင်တွေလည်း ပွစာကျဲသွားပါတယ်..... အဲ့လိုဖြစ်ရင်တော့...မိမိComputer ကလုံးဝကိုလေးလံသွားပါလိ့မ်မယ်...
window system အတွက်မလိုလားအပ်တဲ့ file တွေ၊ internet သုံးတဲ့ စက်တွေမှ mozilla, IE တို့ရဲ့ file error တွေနဲ့တစ်ခြား software applications တွေမှ file error တွေကိုဒီ Portable က အတတ်နိုင်ဆုံးဖြေရှင်းပေးပါလိ့မ်မယ်.......
Size ကတော့ 2MB သာသာ ပဲရှိပါတယ်....
ကွန်ပြူတာကို အသုံးပြုရင်းနဲ့ စက်ဟန်းသွားတာမျိုး၊ မောက်ကလေးကို လေးလေးပင်ပင်နဲ့ ရွေ့ရတဲ့အခါမျိုး၊ ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်လျှင် နည်းနည်း အချိန်စောင့်ဆိုင်းနေရတာမျိုးတွေကို ကွန်ပြူတာနဲ့ မကင်းသူတိုင်း ကြုံတွေ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ၄င်းကဲ့သို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ ကွန်ပြူတာအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ရမ်ကဒ်ရဲ့ ရှုပ်ထွေးစွာ တွက်ချက်နေရမှု့များကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က စာတစ်ကြောင်းကို ဒီနေ့ အလျှင်အမြန်ဖော်ပြနိုင်ရန်နှင့် စက်ထဲမှာ မသုံးတာကြာတော့တဲ့ ဒယ်တာတွေကို ဆေးကြောပေးဖို့အတွက် ဒီဆော့ဝဲလေးကို သုံးကြည့်ပါ။ အင်စတော လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။
သိပြီးသား software လေးပါ latest version လေးထပ်တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။ fullversion အတွက် serial key ပါထဲ့ ပေး ထားပါတယ် serial key ထဲ့နည်း က တော့software ကို install လုပ် ပြီးပြီး run ပါ ပြီးရင် Quick Setting - Activate all functions Enter icense ကိုနိုပ်ပြီး serial key ကို copy ကူးထည့်ပါ ActivateNow ကိုနိုပ်ပေးလိုက် ပါ full version ဖြစ် သွားပါပြီ။
PC Error တွေကို Clean လုပ်ပေးမဲ့ Maintenance Software ကောင်းလေးပါသုံးရတာလွယ်ကူလျင်မြန်ပြီးfeature စုံစုံလင်လင်ပါဝင်ပါတယ်
ကွန်ပျူတာတွေမှာရှိထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲကောင်းလေးတစ်ခုပါအမှားတွေနဲ့ Virus တွေကိုရှင်းထုတ်ပေးဖို့အရမ်းသင့်တော်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာဘာကြောင့်လေးနေတာလဲလို့ သိချင်ရင်ဒီဆော့ဝဲလေးနဲ့ စစ်ကြည့်
အဖြေသိလာလိမ့်မယ်...။နေစဉ် သုံပြီးတိုင်း အိပ်ခါနီးတိုင်း ရှင်းပေးလို့ ရတယ် ။ စောင့်နေစရာမလိုပါဘူး
ရှင်းပြီးရင် Auto shutdown လုပ်ပေးထားဖို့ ပါလာတယ် ။ 2013 အတွက်အသစ်ထွက်လာတဲ့ဟာလေး မလို့ အသုံးလိုသူများ ယူလိုက်ပါ ။Full Version ဖြစ်ဖို့Key ပါတယ်နော်..Setting ကို နှိပ်လိုက် အထဲရောက်ရင် Auto Clean ကိုရွေးပြီးရင်Automatically Sweep ဆိုတာ အမှန်ချစ်လိုက်တာနဲ့ Key ဖြည့်
အောက်နားမှာ Key ဖြည့်စရာ အကွက်လေးပါလာပါလိမ့်မယ်Text file ထဲက ကီးကို ဖြည့်လိုက် ။ အဲ့ဆိုရင် Full version ဖြစ်ပါပြီ...
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ။
PC Cleaner Pro 2013 (V10.11) Full Version Download
PC Cleaner Pro လို့ခေါ်တဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏ start-up အချိန် နှင့် performance ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေမည့် software တစ်ခုပါဖြစ်ပါတယ်။ System registry များကို စစ်ဆေးပေးခါ ပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊ မလိုလားအပ်သော Junk file များကို ရှင်းလင်းပေးခြင်း၊ နောက်ခံ background process တွင်ပွင့်နေသော အသုံးမပြုသည့် task process များ (ဥပမာ- program updater) ကို သတ်ပေးခြင်း၊ worms, spyware, adware အစရှိတဲ့ antivirus များကို ရှင်းလင်းပေးခြင်း၊ Privacy ပိုင်းနှင့် Security ပိုင်းတွင်လည်း မလိုအပ်သည့် ActiveX file များကို ရှင်းလင်းပေးခြင်း စသည်တို့ကို one click ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Antivirus software တစ်ခုခုနှင့်ပါ အတူတကွအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် အခြား System cleaner, booster များနှင့်မတူပဲ ထူးခြားချက်ကတော့ Security ပိုင်းတွင် malware များ၊ spyware များ စသော antivirus များကို ရှင်းလင်းရာတွင် microsoft server မှ တိုက်ရိုက် download ရယူပြီး ရှင်းလင်းပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Scheduler လို့ခေါ်တဲ့ အလိုအလျှောက် scan ဖတ်ပေးနိုင်တဲ့ စနစ်မပါဝင်ခြင်းက အားနဲချက်တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် အသုံးများသော ကွန်ပျူတာများမှာ ၃ ရက် တစ်ကြိမ်ခန့် manually လုပ်ပေးနိုင်လျှင် အဆင်ပြေပါတယ်။5MB ခန့်ရှိခါ Window XP မှ 8 အထိအသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ download လုပ်ခါ PC Cleaner Pro 2013 v10.11 ဖိုင်ကို run ပြီးလျှင် install လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင်ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း Register button ကို click နှိပ်ခါ serial ဖိုင်တွင်ပါဝင်သော serial key တစ်ခုခုကို ထည့်ခါ Activate ကို နှိပ်ပေးလိုက်လျှင် Full Pro version ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Uniblue System Tweaker 2013 full version ဆော့ဝဲလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ
ဒီဆော့ဝဲလေးအကြောင်းအားလုံးလဲသိကြပြီးသားဆော့ဝဲလေးပါပဲ ဒီကောင်လေးကတော့2013 ထွတ်လေးပါ Window System တွေ PC ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းပိုမြန်စေခြင်း - Hard Drive
ထဲရှိဖိုင်တွေကိုလည်း စီပေးခြင်း - Hard Disk ထဲက မလိုတဲ့ဖိုင်တွေကိုရှင်းပေးခြင်းနှင့်မလိုလားအပ်တဲ့
Registry key တွေကိုလည်း ရှင်းပေးခြင်း System Error တွေကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆောင်ထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲကောင်းလေးပါပဲ version လေးဖြစ်ဖို့ အတွက်သူ့ ရဲ့key ပါထည့်ပေး ထားပါတယ် ဆော့ဝဲကတော့အောက်ကလင့်လေးခုနဲ့ တင်ထားပေးပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကဒေါင်းယူ
ကွန်ပျူတာအတွင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြင့် Defragment လုပ်ပေးနိုင်မယ့် အစွမ်းထက် Software လေးတစ်ခုဖြစ်
ပါတယ်...ကွန်ပျူတာ မှန်သမျှ အပတ်စဉ် လစဉ် Defragment လုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါ
တယ်..ဒါမှ မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာဟာ အစဉ်ပေါ့ပါးနေမှာဖြစ်ပါတယ်...
Download=>Solidfiles / Ziddu
အကောင်းဆုံး Register cleaner Registry Reviver 3.0.1.112
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတွင် Program တစ်ခုကို Install သို့မဟုတ် Uninstall ပြုလုပ်စဉ်တွင် ကျန်ရှိနေသော Registry Signature များ ကြောင့်မိမိ၏ ကွန်ပျူတာ နှေးကွေးခြင်း၊ Crash ဖြစ်ခြင်း၊ Errorတက်ခြင်း စသောအခြေအနေများကို တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ထိုသို့သော Registry Error များကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် အတွက် မိမိအသုံးပြုသော ကွန်ပျူတာတွင် Registry Cleaner တစ်မျိုးမျိုး အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ယခု နောက်ဆုံးထွက် Registry Reviver 3.0.1.112 တွင် အထက်တွင်ဖေါ်ပြခဲ့သော Error များကို ဖြေရှင်းနိုင်သည့် အပြင်၊ အခြား Registry Cleaner Software များထက်အားသာသည့်အချက်မှာ Registry Error Scan ဖတ်ချိန်လျှင်မြန်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ Registry Error များကို Scan ဖတ်ပြီးနောက် Fix မပြုလုပ်မှီ Auto Backup ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။Version အသစ်မှာ User interface ကိုပိုမိုအဆင်ပြေစေနိုင်သည့် ပုံစံပြောင်းလဲပေးထားပြီး၊ Start up manager ကိုလည်း All services နှင့် Third party service ဟူ၍ ခွဲခြား ပေးထားပါတယ်။ Start up manager ကို ကွန်ပျူတာ တက်စတွင် လျှင်မြန်စေရန် updater ကဲ့သို့သော application များကို disable ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Scan ဖတ်ခါ Fix ပြုလုပ်ပြီးနောက် အဆင်မပြေမှုများကြုံတွေ့ရပါက၊ Option tab အောက်ရှိ၊ Restore Section မှ Restore ပြုလုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ StartUp Manager, Registry Optimizer နှင့် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်တွင် Auto Scan ဖတ်ပေးနိုင်သော Schedule Function များလည်းပါဝင်ပါတယ်။Download လုပ်ပြီးနောက် ဖိုင်ကိုဖြည်ခါ၊ RegistryReviverSetup.exe ကို install လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် task bar notification မှာ ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း exit ဖြင့်ထွက်ပါ။ Install လုပ်ထားသော directory ထဲသို့ Crk file တွင်ပါဝင်သော 32bits (86) သို့မဟုတ် 64bits (64) မိမိစက်နှင့်သင့်တော်သည့် RegistryReviver.exe ကို Replace ပြုလုပ်ပေးလိုက်လျှင် Full Version အသုံးပြုနိုင်ပြုနိုင်ပါပြီ။
Wise Registry Cleaner လေးကတော့ ကွန်ပြူတာရဲ့ အဓိက နေရာဖြစ်တဲ့ Registry ကို ရှင်းလင်းပြုပြင်ပေးတဲ့ Portable Software လေးပါ.... စမ်းသုံးချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်
IN Burning - ON Thursday, February 21, 2013 No comments
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... CD, DVD တွေ Burn ဖို့အတွက် Ashampoo Burning Studio 6.83 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...ခွေ Burn ဖို့အတွက်ပဲ သုံးမယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဖိုင်ဆိုက်လည်းသေးပြီးအဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်မှာပါ..ကျွန်တော်ကတော့ Sharebeast နဲ့ Zippyshare မှာတင်ပေးထားပါတယ်...
Maxthon browser မှာ မြန်မာလို ရေးလို့ ဖတ်လို့ ရအောင်လုပ်နည်း
IN Browsers - ON Thursday, February 21, 2013 No comments
Maxthon Browser ကို မရှိသေးရင် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ Download
့မြန်မာလို ရေး/ဖတ်နိုင်ဖို့ Zawgyi ဖေါင့်ကို အောက်ပါနည်းလေးအတိုင်း ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်...
အနီရောင် နဲ့ ဝိုင်းထားတဲ့နေရာလေး Smile ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး Options ကို နှိပ်ပါ....
နောက်ထပ် Page တစ်ခုပွင့်လာရင် Select ကိုနှိပ်ပြီး....
Selact မှာ Zawgyi One ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ...ခုဆိုရင် မြန်မာစာတွေကို အဆင်ပြေစွာ ရေးလို့ ဖတ်လို့ ရသွားပါပြီ.... (တကယ်လို့မရသေးရင် Maxthon Browser ကိုပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ပါ)
စိတ်မကောင်းစရာ တစ်ခုကတော့ Maxthon Browser က Myanmar Unicode Font ကို Support မလုပ်နိုင်တာပါပဲ ... ဒါပေမဲ့လည်း အဆင်ပြေပါတယ်...:)
Slim Browser 6.02 Build 66 Final (အရမ်းပေါ့ပါးပြီး အရမ်းမြန်တဲ့ Browser လေးပါ)
Slim Browser လေးက ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး နဲ့ သုံးလို့ ကောင်းတဲ့ အင်တာနက် Broswer အသစ် လေးပါ 2.88MB ပဲရှိပါတယ် ...
မြန်မာ Font ကိုတော့ IE မှာလိုပဲ ပြောင်းပေးရပါတယ် ကျနော် စမ်းကြည့်တာ အဆင်ပြေပါတယ် တကယ့် Slim Browser လေးပါ ...။
SlimBrowser isapowerful and compact tabbed multiple-site browser with full unicode support. It incorporatesalarge collection of powerful features like built-in popup killer, skinned window frame, form filler, site group, quick-search, auto login, hidden sites, built-in commands and scripting, online translation, script error suppression, blacklist / whitelist filtering, URL Alias. SlimBrowser let you open several sites at once with the support of site groups. It provides one-click access to search engines via pre-defined quicksearch entries. You can easily define your own quicksearch entries. It provides one-click access to personal accounts via predefined autologin entries. It supports URL filter and in-page ad filter which blocks annoying advertisements and offensive content effectively. It is able to render RSS new feeds into readable web pages. It support URL alias and built-in commands. It also supports ftp file uploading. The built-in ScriptPad is able to edit JScript / VBScript and HTML files with syntax highlighting.
ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ New Browser လေးနဲ့မိက်ဆက်ပေးခြင်တယ် အရမ်းကိုမြန်ပါတယ်
ပုံစံကတော့ Firefox နဲတူတယ်အရမ်းကိုမြန်ပါတယ် Google ကိုဒီ Web Browser နဲဖွင့်လိုက်ရင်
တော့ One Second တောင်မကြာပါဘူး New Tap ကလဲအရမ်းကိုမြန်ပါတယ် New Tap ကတော့
Google Chrome နဲ့တူတယ် New Tap ရဲမြန်ဆန်တာကတော့ မျက်စိတစ်မှိတ်လေးမှာဘဲ အရမ်းကို
Firefox နဲတူတယ်ဆိုတော့ မြန်မာကြည့်လိုမရရင်တော့ ပုံမှာပြတဲ့အတိုင်း Tools ကို Click
လိုက်ပါပြီးတော့ Options ကို Click လိုက်ပါပြီးရင်တော့ အောက်ပုံလေးလိုက်ပေါလာလိမ်
ပြီရင် Content ပြီးတော့ Fonts ကို Zawgyi ကိုပြောင် ပြီးရင်တော့ OK
ဒီ Web Browser ဟာ Firefox နဲ Google Chrome လေးပေါင်းလိုက်တဲ့
Web Browser လိုပါဘဲ့။
Wyzo Download Here
Comment လေးပေးကြပါ ။
IN Antivirus - ON Thursday, February 21, 2013 No comments
Trojan , Malware , Virus စတဲ့ ကွန်ပျူတာကို ဒုက္ခပေးမယ့် အဖျက်အမှောင့် Program တွေကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးမယ့် Software လေးဖြစ်ပါတယ်..Version အသစ်တွေ့လို့တင်ပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ..
IT Helper မှပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်သည်။
Download=>solidfiles / zippyshare
ကွန်ပျူတာ စတက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ကွန်ပျူတာအတွင်း ထည့်သွင်းထားသော Program များသည် Startup
အနေဖြင့် စတင်အလုပ်လုပ်ပါသည်..ထိုသို့အလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကွန်ပျူတာအတွက် လိုအပ်သော
System အစိတ်အပိုင်းများ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ကြသည်...Virus များသည် အဆိုပါ Startup ထဲတွင်
၀င်ရောက်နေရာယူကြပြီး..ကွန်ပျူတာစတက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက်စတင်အလုပ်လုပ် တိုက်ခိုက်ဖျက်စီးကြပါ
သည်... Startup ထဲတွင်နေရာယူထားကြသော Virus များကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခြင်းဖြင့် ကွန်ပျူတာအတွင်း
၀င်ရောက်နေသော Virus ရဲ့ လောင်စာကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..ဒါပေမယ့်လုံးဝ ရှင်းလင်းသွားခြင်းတော့မဟုတ်သေးပါဘူး..System နည်းပညာပိုင်းကိုလေ့လာနေသူများအတွက်ကတော့
အသုံးတည့်မယ့် Software ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်...လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ပါပြီခင်မျာ
Download=>zippyshare / ziddu
IN Design Tools - ON Thursday, February 21, 2013 No comments
ဒါလေးကတော့ BusinessCards လုပ်ခြင်သူများအတွက်ပါအရမ်းကောင်းတဲ့ဆော့ဝဲေ လးမို့ပြန်လည်မျှဝေ
လိုက်ပါတယ်သုံးချင်ရင်တော့အောက်မှယူသွားလိုက်ပါProtable Version လေးဖြစ်လိုအသုံးပြုလိုအဆင်
EMCO Network Malware Cleaner 4.7.15.115 Full Keygen Free Download
Trojan , Malware & Other Virus Type တွေကို အပေါ့ပါးဆုံးနှင့်အလျင်မြန်ဆုံး ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးမယ့်နေရာမှာ.Antivirus ကြီးတွေတောင်မှ မသတ်နိုင်တဲ့ Virus အမျိုးအစားများစွာကိုလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြင့် သတ်နိုင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်..ကွန်ပျူတာသမားတိုင်းအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software ကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်..ဒီ Software ကိုထည့်ထားမယ်ဆိုရင် အခြား Antivirus များကိုလည်း ထည့်သွင်းထားစရာမလိုလောက်အောင် ကိုအစွမ်းထက် ပါတယ်ခင်ဗျာ။ password တောင်းပါက Password: koskomputer လိုထည့် ပေးလိုက်ပါအဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်
Malwares, Spywares များအတွက် အကောင်းဆုံး Malwarebytes Pro 1.70
လက်တလောအသုံးများလာတဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး anti-malware program တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Malwarebytes Pro နောက်ဆုံးထွက် Version 1.70 ပါ။ viruses, worms, trojans, rootkits, dialers, spyware များကို ကွန်ပျူတာကို မလေးစေပဲ scan ဖတ်ခါ ရှာဖွေပေးနိုင်ပြီး၊ အခြား နာမည်ကြီး anti-virus program များ နှင့်မရသည့် malwares များကို ပင် Malwarebytes Pro ဖြင့် အပြီးသတ် ရှင်းလင်းပေးနိုင်တယ်လို့ သူ့ရဲ့ homepage မှာဖေါ်ပြထားပါသေးတယ်။ အခြား anti-malware, anti-spyware program များနှင့် မတူပဲပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အချက်ကတော့ malware definition update ကိုနေ့စဉ်နီးပါး ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အချိန်နှင့် သတ်မှတ်ပေးထားခါ scan ဖတ်ပေးနိုင်သော Scheduler စနစ်ပါရှိခြင်း၊ Anti-virus program ကြီးများကဲ့သို့ပင် real time protection စနစ် မှာတိကျသေချာစွာပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်းတို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ malwarebite-setup-1.70.0.1100.exe ကို install ပြုလုပ်ပေးပြီးနောက် Exit မလုပ်ပဲ definition update ကိုပြီးစီးအောင်ပြုလုပ်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် download file ထဲတွင်ပါဝင်သော keygen.exe ကိုဖွင့်ခါ serial key များကို ထည့်ပေးလိုက်လျှင် Pro version အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။အောက်မှာလင့်သုံးခုတင်ထားပေးပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကယူသွားလိုက်ပါ
3D Text နဲ့ 3D Logo လုပ်ချင်သူများအတွက် 3D Text Logo Maker v13.01041901 Protable ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..ဒီဆော့ဝဲလေးက Photoshop တို့လို.. Indesign တို့လို ဆော့ဝဲကြီးတွေကို ကိုင်တွယ် အသုံးပြုတတ်စရာမလိုပါဘူးအသွင်အပြင်ကလွယ်လွယ်ကူကူပါ.. သိပ်လက်ရာမြောက်တဲ့ 3D Text တွေကို ဖန်တီးနိုင်မှာပါ..
IN Converter - ON Thursday, February 21, 2013 No comments
Ultra Mobile 3GP Video Converter ဟာ ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ 3GP converter အမျိုးစားဖြစ်ပြီး
3GP/3G2/MP4 video format အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ 3GP/3G2/MP4 format type တွေကို
Iphoneများ/ Sony/Samsaung အစရှိသော 3GP format ပါဝင်သော Adriod phone များ၊ တခြားသော ဖုန်းအမျိုးအစားများ နှင့်
3GP player နဲ့တွဲဖွင့်ထည့်သွင်းနားဆင် အသုံးပြုချင်သူများအတွက် အသုံးဝင်မဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်။
DivX, XviD, AVI, WMV, MPG, MPEG, MP4, M4V, FLV, 3GP, ASF, RM, RMVB, MOV, MOD, ASX, MKV, OGM, SVCD, VCD, VOB to 3GP 3G2 H263 MP4 format များကှို 3GP/3G2/MP4 video format အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ သုံးရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လည်း file convert လုပ်နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
Program ကို Install လုပ်ပီးရင် Regist key ကို note pad ထဲမှာပေးထားပါတယ်ဖြည့်သွင်းပြီး Activate လုပ်ပေးပါ........။။
Format အားလုံးနီးပါးကို Convert လုပ်လိုရတဲ့ Converter လေးပါလုပ်လိုရတဲ့ Format တွေကတော့
အဲဒီ format တွေကို ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်. အားလုံးနီးပါးလောက် ရပါတယ်အောက်မှာလင့်သုံးခုတင်
IN Dictionary - ON Thursday, February 21, 2013 No comments
မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန် Portable လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ZawGyi one ကိုရွေးချယ်ပြီး..မိမိသိရှိလိုသော စကားလုံးကို
မြန်မာဘာသာကနေ အင်္ဂဘာသာလို့၎င်း...အင်္ဂလိပ်ဘာသာကနေ မြန်မာဘာသာ သို့လည်းကောင်းပြန်ဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Download==>mediafire / solidfiles
ကွန်ပြူတာဆိုင်ရာဝေါဟာရတွေကို အလွယ်တကူသိနိုင်မယ့် Dictionary ဆော့ဝဲ
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကွန်ပျူတာကို နေ့စဉ်အသုံးပြုနေရင်း ကွန်ပျူတာသုံး စကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေထဲက တစ်ချို့သော စကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို မဖြစ်မနေသိဖို့ လိုအပ်လာတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ် .. သာမာန် အဘိဓာန်တွေထဲမှာ လှန်လှောရှာဖွေကြည့်ပေမယ့် Field မတူတဲ့အတွက်
အဲဒီတော့ ရမ်းသမ်းပြီး နှိပ်ချင်တာနှိပ်ထည့်တာ ပေါ်ချင်တာတွေ ပေါ်သွားပါလေရော .. :D
ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ် ပရိုဂရမ်လေးကတော့ အဲဒီလို အခက်အခဲမျိုးနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါမှာ အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် ပရိုဂရမ်လေးတစ်ခုပါ ..
ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ စကားလုံးတွေအတွက် သီးသန့်ရေးသားထားတဲ့ ကွန်ပျူတာအဘိဓာန်ပေါ့ ..
ဒီဆော့ဝဲလေးက Install လုပ်စရာလည်းမလိုသလို အသုံးပြုရတာလည်း သိပ်ကို လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ် ..
ဆော့ဝဲလေးကို Double Click နှိပ်ပြီး Run ..
အဘီဓာန်ဝင်းဒိုးလေး ပွင့်လာပြီဆိုရင် ကိုယ်သိချင်တဲ့စာလုံးကို ရိုက်ထည့် .. အဲဒီလို စာလုံးတွေကို ရိုက်ထည့်နေတုန်းမှာပဲ အောက်မှာ သက်ဆိုင်ရာစာလုံးတွေတက်လာမယ် ..
အဲဒီတက်လာတဲ့စာလုံးတွေထဲက ကိုယ့်စာလုံးကို ကလစ်လိုက်တာနဲ့ ညာဖက်က အကွက်ထဲမှာ အဲဒီစာလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ပြပေးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
အဲ .. အသံထွက်ပါသိချင်သေးတယ်ဆိုရင်လည်း အသံထွက်ပြောပြမယ့် Tool လေးပါ ထည့်သွင်းထားပါတယ်ကဲလိုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအောက်မှာအဆင်ပြေမယ်လင့်က ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ....
Driver ပျောက်တဲ့ ပြသာနာကို ဖြေရှင်းပေးမဲ့ Driver Easy Pro 4.1.1.32690 Full
IN Driver - ON Thursday, February 21, 2013 No comments
Driver ပျောက်တဲ့ ပြသာနာကို ဖြေရှင်းပေးမဲ့ DriverEasy Pro 4.1.1.32690 Full အခု software ကို windows ခဏခဏ တင်တဲ့သူ တွေဆောင် ထားသင့်တဲ့ software ပါ။လိုအပ်တဲ့ Driver တွေကို auto download လုပ်ပြီး install လုပ်ပေးပါတယ်။ hardware, video cards,monitors, hard disk, network card,audio card အစရှိတဲ့ driver တွေ ပျောက်နေခဲ့ရင်အခု software ကို အသုံးပြုပြီး ဖြေရှင်းနိုင် ပါတယ်။
IN နည်းပညာစာအုပ်များ - ON Thursday, February 21, 2013 No comments
အခုကျွန်တော် Internet မှာခရီးသွားနေရင်းနဲ့ တွေခဲ့တယ် Internet ခရီးသယ်များအတွက်
ပေါ့ Photoshop E-books များကိုရှာတွေခဲ့တယ် ရှင်းပြတာတွေအရမ်းကိုကောင်းပါတယ်
IT ခရီးသယ်များ Photoshop အကြောင်းကိုမသိသေးရင်တော့လေ့လာစေချင်ပါတယ်
Photoshop ဟာ Photo ပြင်တဲ့နေရာမှာတော့ထိပ်ဆုံးကဆိုတာတော့သိကြမှာဘဲ ကြားတယ်
Window 7, XP, Visita & Other ကို USB ဖြင့် တင်နည်း
ဒီတစ်ခါလည်း မိမိကွန်ပျူတာကို USB Stick ကနေ Window7တင်နည်းလေးကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်..
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိကွန်ပျူတာမှာ DVD Drive မရှိသူများ ရှိပါသော်လည်း ကွန်ပျူတာက အသိအမှတ်မပြုဘူးဆိုရင် Window တင်ဖို့ တော်တော်အခတ်အခဲလေးရှိပါတယ်..
အဲဒါကြောင့် ကိုယ်ချင်းစာမိလို့ တင်ပေးဖြစ်သွားတာပါ...အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Software လေးက အခြား DVD Drive ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာမှနေပြီး USB Stick ထဲကိုပြောင်းပြီး မိမိကွန်ပျူတာမှာ Run လို့ရအောင်ကူညီပေး
ပါလိမ့်မယ်။ အသုံးပြုပုံ အသေးစိတ်ကိုလည်း ရှင်းပြထားပါတယ်..။ အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Software
လေးက Window7မှ မဟုတ်ပါဘူး အခြား Window XP/Visita/8 တို့ကိုလည်းတင်ပေးနိုင်ပါတယ်...
အသုံးပြုပုံ အသေးစိတ်ကိုတော့ စာအုပ်လေးထဲမှာရှင်းလင်းပြသထားပါတယ်...အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ...
Photoshop cs5 အသုံးပြုနည်း မြန်မာလို စာအုပ်လေးပါအသုံးလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ
ကွန်ပျူတာ အင်တာနက်ကို ခုမှ စ,သုံးနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ လေ့လာ ဖတ်ရှု့သင့်တဲ့ ဆရာ မျိုးသူရ ရဲ့ ( နေ့စဉ်သုံး အင်တာနက် )
ဆရာမျိုးသူရ ရေးထားတဲ့ နေ့စဉ်သုံး အင်တာနက် ဆိုတဲ့ စာအုပ် ပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. အင်တာနက်ကို ခုမှ စပြီး သုံးမဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ အထောက် အကူပြုပါလိမ့်မယ် .. ဒီစာအုပ်မှာ ဂျီမေးလ် အသုံးပြုနည်း ၊ ဂျီမေးလ်အကောင့်ဖောက်နည်း ၊ အီးမေးလ်ပို့ခြင်း စတဲ့ အခြေခံ အချက်အလက်တွေကို အသေးစိတ်ရေးပေးထားပါတယ်...။
Gmail ကိုဝင်ရပြီး Gtalk ပဲ ၀င်လို့ မရတဲ့ ပြဿနာ အကြောင်း( လက်တွေ့ )
IN Gtalk/Gmail နည်းပညာများ - ON Thursday, February 21, 2013 No comments
ဒီပြဿနာမျိုးက အဖြစ်များတယ်လို့မတွေ့ ရပါဘူး။ အနီးနားက သူငယ်ချင်းတွေဆီမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာ
လေးပါ ။ အဲ့လိုဖြစ်နေတယ် ။ ကူညီပါအုံးလို့ ပြောရင် နာရီရက်စွဲ မှန်လားအရင်ကြည့်မမှန်ဘူးဆို
သေချာတယ် အဲ့ပြဿနာ။ စာဖတ်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရနေပါတယ်Error messageမှာရေးပြထားတယ်။သတိမမူလို့ လည်းဖြစ်နိုင်သလိုဘာသာပြန်ရမှာပျင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အဲ့တော့ ဖြစ်ခဲ့သော်ရှိ သုံးရအောင် မှတ်တမ်းတင်ပြီးရေးသားသမှု ပြုလိုက်ရပါကြောင်းပါခင်ဗျာ......
IN Internet Tools - ON Thursday, February 21, 2013 No comments
Google Earth ကို အားလုံးသိကြမှာပါ.... Protable လေးမို့ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.....။
IN Internet Download Manager - ON Thursday, February 21, 2013 No comments
Internet Download Manager 6.15 Build2Full Version အသစ်ထွက်တာလေးတွေလိုတင်ပေးလိုက်
▼ 02/17 - 02/24 (108)
ဝိပဿနာရှုနည်းကျမ်း စာအုပ် 2MB
Typing Totur Software မြန်မာ ကီးဘုတ်လေးပါ
Kingston Format Utility v1.0.3.0 (USB Drives တွေ F...
USB Disk Security 6.2.0.125 Full Version လေးပါ
USB Manager Version 1.96
Xilisoft Video Converter Ultimate v7.7.2.20130217 ...
USB Disk Security 6.2.0.30 Datecode 02.01.2013
Wise Folder Hider1.24
Nero Burnning 12 Portable
TeraCopy 3.2 Beta 2
Windows Gadget ဖြင့် စက်ကို ပိတ်ခြင်း,အော်တို ပိတ်...
Super Hide IP v3.2.7.8 Full Patch Free Download
Shut down ချတာ မြန်စေချင်ရင်
Window Boot တတ်တာ မြန်စေချင်ရင်
ဝင်းဒိုးတက်တာ ပိုမိုမြန်ဆန်စေမယ့်နည်းလမ်း (ဆော့ဝဲလ...